Mugabe’s Emancipation Of Blacks Will Be Remembered For Long —Osinbajo - TheCityPulseNews.com
Vice President Yemi Osinbajo has said that the legacy of a determined, proud and assertive black emancipation left by late Robert Mugabe of Zimbabwe will live long in the hearts of Africans.
Osinbajo is in Zimbabwe to represent President Muhammadu Buhari at the state funeral of the late former president of Zimbabwe.
“We wish the people of Zimbabwe great peace and prosperity.”
READ MORE: Another Nigerian killed, two others injured in South Africa
“This is one of the reasons why President Mugabe stood out as one of those leaders whose zeal, passion and selfless commitment to the emancipation of the people of Zimbabwe was not only a great encouragement to the independent movement everywhere but more to the self-realisation for black people practically everywhere.
READ MORE: How Ghana Humiliate Super Eagles Of Nigeria With 4-1 In Wafu Cup Final.
Harare International AirportNigeriaRobert MugabeZimbabwe